Wararka - Badeecadaha resin BMI
Polycarbonate/polypropylene (PC/PP) Filim/Xaash (duubid)
Iyo Badbaadada Xalka Walxaha Cusub
Sichuan EM Technology Co., Ltd. (EMT) waa soo saaraha agab caalami ah oo xirfad leh, oo ay ka go'an tahay in ay soo bandhigto xalal badbaado leh oo saaxiibtinimo leh si loo abuuro nolol tayo wanaagsan oo bulshada ah.
Filimkayaga dahaarka, filimka indhaha, cajalad mica ah, resin iyo alaabooyin kale ayaa si weyn ugu adeega awoodda UHV, tamarta dabaysha, tamarta qorraxda, isgaarsiinta 5G, qalabka elektiroonigga ah ee macaamiisha, qalabka guriga iyo qeybaha kale.Tayada wanaagsan ee badeecadaha iyo adeegyada ayaa si fiican looga yaqaan warshadaha.
Ka dib sanado badan oo cilmi baaris & horumarin iyo qaabeyn ah, waxaan ku gaadhnay guul weyn oo wax-soo-saar sare leh oo soosaarka resin BMI ee Copper Clad Laminates.
Magaca Alaabta: BMI Resin (Maleamide Resin).
Fasalada: DFE936, DFE950
Alaabtaani waa monomer heerkulbeegga crystalline hooseeya, waxaa loo isticmaali karaa sida wax ka beddelka kulaylka u adkaysta xabagta epoxy, kaas oo uu leeyahay beddelka silsilad gaaban oo gacan ka geysanaya in la kordhiyo kala dheeraynta kelli, taas oo wiiqday crystallinity of resin, hagaajinaysaa milanka, xalinta dhibaatada liidata liidata ee resin double maleimide caadiga ah, loogu talagalay diyaarinta ee loox-wareeg daabacan oo heer sare ah, qalabka dahaarka F-fasalka, alaabta-waxqabadka sare-u adkaysta abrasion, iwm.
Qiimaha caadiga ah
Budada adag cad
DSC,10 ℃/daqiiqo, N2
1.1 Alaabta waxaa lagu koobiyeeyaa diallyl bisphenol A sida resin matrix ah oo isku dhafan, kaas oo u adkaysta heerkulka sare, shucaaca iyo xoogga sare.
1.2 Badeecada waxaa lagu bedeli karaa resin epoxy caadiga ah ee loogu talagalay diyaarinta alaabta dahaarka, xabagta heerkulka sare, iwm.
1.3 Alaabtu waxay leedahay sifooyin milmay oo la dhalaali karo, waxaana loo isticmaali karaa in lagu dhejiyo ama lagu dhejiyo walxaha fiber-ka, iwm, oo ku habboon qaybo waaweyn.
Alaabta Tani waa resin thermosetting dhibic dhalaalaysa hooseeyo, waxaa loo isticmaali karaa sida modifier ah kulaylka u adkaysta of resin epoxy, ay qaab-dhismeedka maleimide badan oo ka mid ah qaab-dhismeedka maleimide daciifiyaa crystallinity ee xabagta ah, hagaajinaysaa milanka, xalliyo dhibaatada liidata liidata ee caadiga ah double maleimide. , si toos ah ayaa loogu dhejin karaa diyaarinta guddiga wareegga daabacan ee heer-sare ah, qalabka F-fasalka, alaabta wax-qabadka sare leh ee u adkaysta, iwm.
Meelaha iftiinka wanaagsan, ku fiirso isha qaawan
Adag huruud ah oo bunni ah
25℃, 50wt% DMF/MEK (wt/wt=1:1)
Cad oo hufan
2.1 Alaabooyinka waxaa lagu koobiyeysan karaa diallyl bisphenol A, cyanate, amine curing agent, polyphenylene ether, iwm
2.2 Badeecada waxaa lagu beddeli karaa resin epoxy caadiga ah, kaas oo loo isticmaalo in lagu diyaariyo walxaha dahaarka, xabagta heerkulka sare, iwm.
2.3 Alaabtu waxay leedahay sifooyin milmay oo la dhalaali karo, waxaana loo isticmaali karaa in lagu dhejiyo ama lagu dhejiyo walxaha fiber-ka, iwm, oo ku habboon qaybo waaweyn.
DFE936 & DFE950 waa xulashooyin wanaagsan oo loogu talagalay diyaarinta taarikada sideyaasha, sidayaal saxan u eg iyo CCL-yada xawaaraha sare leh.
Fadlan nala soo xidhiidh, aan kaa caawino inaad gantaal ku riddo ganacsiyadaada CCL.
Qofka xiriirka: Mr. Feng,fengjing@emtco.com
Waqtiga boostada: Jun-07-2022